Multi element yakakwenenzverwa skrini ndeye munhu uye akangwara kuongorora michina yakagadzirirwa nekambani yedu zvinoenderana nezvinodiwa nemusika uye maitiro ekugadzira. Performance uye hunhu hwezvakawanda zvinhu zvakakwirira kushanda sc ...Verenga zvimwe »
Sarudzo hunyanzvi hweiyo inoyerera inodedera skrini
1. zvinoenderana nesarudzo yesiti Kureba uye upamhi hwesaiti zvinofanirwa kutariswa kune yakasarudzika vibration yekuongorora mhando; dzimwe nguva hupamhi hwechibudiro cheiyo linear vibrating skrini inogumira, uye kukwirira kwenzvimbo i ...Verenga zvimwe »
Iyo yese yekuongorora maitiro eanotutisa mota ndeyekuongorora uye kuverenga izvo zvigadzirwa. Izvo zvinhu zveakasiyana magadzirirwo akapatsanurwa kuita epamusoro uye ezasi zvinhu. Iko kuongorora kwekuongorora kunofanirwa kuve kwakakwira, iyo hama pr ...Verenga zvimwe »
Vibration mota: Iyo vibration mota ine seti yeanogadzikiswa eccentric mabhureki kumagumo ese eiyo rotor shaft, uye simba rekusimudzira rinowanikwa necentrifugal simba rinogadzirwa neiyo yekumhanyisa-kumhanya kutenderera kweiyo shaft uye eccentric block. Iyo vibration frequency renji ye ...Verenga zvimwe »